Izvo zvakakosha zvekuita kwevanhu
Kudzidziswa uku kwakanangana nevateereri vanoda kuwana ruzivo rwekutanga runotonga magariro evanhu anoitwa nevakuru venzvimbo.
Nzwisisa kuti magariro evanhu akazvarwa uye akashanduka sei; kupatsanurwa kwematunhu kwakagadzirisa sei chikamu ichi; sei muma2000, mitemo mikuru ine chekuita nezvikamu zvakasiyana-siyana zvekugarisana kwevanhu pamwe chete nekuchinja kukuru kwemagariro evanhu, sekukwegura kwevanhu, kuwanda uye hterogeneity yezvinetso zvebasa, kushandurwa kwechikwata chemhuri, kuonekwa kwezviitiko zvehutano hwehutano. , kugadziridzwa kwekutarisirwa nevakuru vehurumende venzvimbo yevanhu.
Kusagadzikana kukuru kwemutemo kwemakore mashanu apfuura (mutemo weMAPTAM, mutemo weNotre) kwakazunguza sei nzvimbo dzechinyakare dzekugona kwevakuru venzvimbo; sei pakupedzisira, kuchinja kukuru kubasa nhasi (globalization, digital, simba, kushanduka kwezvakatipoteredza, nezvimwewo) kunotikoka kuti tifunge nezvekushandura kwekuita kwevanhu: izvi ndizvo zvinonetsa zvemusangano uyu wepaIndaneti.
Ichaedza zvakare kutsanangura nzira huru dziri kushanda mukati memitemo yeruzhinji iyi, pamwe chete nebasa revatambi.
Izvo zvakakosha zvekuita kwevanhu January 17th, 2022Tranquillus
VERENGA Ndine mvumo yekutaurirana nguva yekutora zororo rinobhadharwa?
pashureKuita munharaunda yehutano nekugara zvakanaka kwevanhu
zvinoteverasauvTage: kudzidza kuchengetedza hupenyu pamazera ese
Accounting uye manejimendi mabasa
Nei uchishandisa Office 365?